Caalim: “Khilaafka Madaxda Waa In Dastuurka Lagu Xalliyo” – Goobjoog News
Diblumaasi ka faalooda siyaasadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in khilaafka taagan lagu xalliyo qaab dastuuri ah.
Diblumaasi Maxamed Maxamuud Nuur (Caalim) oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in mooshinnadu ay cuuryaamiyeen horumarro badan oo uu dalka gaari lahaa.
Waxaa uu tilmaamay in khilaafka iminka taagan lagu dhammeeyo qaab dastuuri ah si looga gudbo in dib uu usoo laabto.
Dhanka kale, Diblumaasi Maxamed Maxamuud Caalim ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay in la adkeeyo xaaladda keenista mooshin ka dhan ah madaxda ugu sarreeysa dalka si madaxduna fursad ugu helaan inay waajibaadka saran gutaan.
“Waxaa Soomaaliya u wanaagsan in la adkeeyo xaaladda mooshinka xildhibaannada ay ku keeni karaan, tusaale ahaan in xeer hoosaadka dib loogu laabto oo waxa weeye la kordhiyo tirada soo jeedinta mooshinka si ay u adkaato sababtu waxa weeye mooshinnadani waxay caqabad ku noqdeen dowladnimada Soomaaliya” ayuu yiri Diblumaasi Maxamed Caalim
Hadalkaan ayaa imaanaya iyadoo weli la hadal hayo khilaafka golaha shacabka iyo xukuumadda soo kala dhex galay oo meeshii u sarreeysay gaaray.